2 Row Seeding Machine (မျိုးစေ့ချစက်)
<p>မျိုးစေ့ တစ်စေ့ ချင်းချ၍ စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။</p><p>မျိုးစေ့ အစုလိုက် ချ၍လည်းစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။</p><p>မျိုးစေ့ တစ်စေ့နှင့် တစ်စေ့ အကွာအဝေး 260/360mm (၁၄လက်မ) ဖြစ်ပါမည်။</p><p><br></p><p>အသေစိတ်အချက်အလတ်များ</p><p>အင်ဂျင်အမျိုးအစား - 1 Cylinder,4 stroke, air cooled</p><p>အဂျင်စွမ်းအား - 7.5 HP (170F0</p><p>ဂီယာအနေအထား - 1-0-2</p><p>ယက်ဘီးအချင်း - 390 mm (၁၅ လက်မ)</p><p>ထယ်ကြောင်းအကျယ် - 260/360mm (၁၄လက်မ)</p><p>မျိုးစေ့လှောင်ကန်(ညာ) - 11 Liter</p><p>တစ်စေ့နှင့်တစ်စေ့ အကွားအဝေး(ညာ) - ၄ပေခြား</p><p>မျိုးစေ့လှောင်ကန်(ဘယ်) - 11 Liter</p><p>တစ်စေ့နှင့်တစ်စေ့ အကွာအဝေး(ဘယ်) - ၂.၅ ပေခြား</p><p>မျိုးစေ့ တန်းအကွာအဝေး - 260/360mm (၁၄လက်မ)</p><p>မျိုးစေ့ အရွယ်အစား(အလျားxအနံ) - 55x14mm (၂လက်မခွဲ)</p><p>စက်အရွယ်အစား - 1350x570x1000 mm</p><p>အလေးချိန် - 51kg</p>
<p>စိုက်ရေးလုပ်ကိုင်တဲ့ တောင်သူလယ်သမားနှင့် ဟင်သီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုးကျတဲ့ တောင်သူများအတွက် တနိုင် လက်တွန်ထွန်စက်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။</p><p>အသေးစိတ်အချက်အလတ်များ</p><p>မော်ဒယ် BK-80</p><p>အင်ဂျင်စွမ်းအား- 7Hp (Gasoline</p><p>ထွန်ကြောင်းအကျယ် 770mm</p><p>ထွန်ကြောင်းအနက် 100mm</p><p>ကလပ်ခ်ျအမျိုးအထား - belt-tension</p><p>အလေးချိန် -85kg</p>
<p>စိုက်ရေးလုပ်ကိုင်တဲ့ တောင်သူလယ်သမားနှင့် ဟင်သီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုးကျတဲ့ တောင်သူများအတွက် တနိုင် လက်တွန်ထွန်စက်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်</p><p>အသေးစိတ်အချက်အလတ်များ</p><p>မော်ဒယ် BK-75</p><p>အင်ဂျင်စွမ်းအား- 7Hp (Gasoline</p><p>ထွန်ကြောင်းအကျယ် 830mm</p><p>ထွန်ကြောင်းအနက် 100mm</p><p>ကလပ်ခ်ျအမျိုးအထား - belt-tension</p><p>အလေးချိန် -95kg</p>
<p>စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်တဲ့ တောင်သူလယ်သမားနှင့် ဟင်သီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုးကျတဲ့ တောင်သူများအတွက်လက်တွန်ထွန်စက်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။</p><p>အသေးစိတ်အချက်အလတ်များ</p><p>အမှတ်တံဆိပ် QN-1WGQ5-1</p><p>မော်ဒယ် 188F-DIESEL</p><p>အင်ဂျင်အမျိုးအစား 1 CYLINDER, VERTICAL INLINED4STROKE,AIR COOLED</p><p>အင်ဂျင်စွမ်းအား- 9.6 KW</p><p>မောင်းနှင်ပုံ GEAR-TYPE</p>
4-Stroke Grass Cutter (ကျောပိုးမြက်ဖြတ်စက်)
<p>ရုန်းအားကောင်းကောင်းနဲ့</p><p>မြက်ရိုင်းရှင်းမလား❗️</p><p>တောတွေရှင်းမလား❗️</p><p>ဈေးနှုန်းချိုချိုသာသာနဲ့ အရည်အသွေးစိတ်ချရတဲ့ မြတ်ဖြတ်စက်တစ်လုံးကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေခင်ဗျ.....။</p><p>အသေးစိတ်အချက်အလတ်များ</p><p>အမှတ်တံဆိပ် JT-GX35</p><p>အင်ဂျင်အမျိုးအစား 4-stroke, gasoline</p><p>အင်ဂျင်စွမ်းအား 0.7kw</p><p>လည်ပတ်အား 6500r/min</p><p>ဆီတိုင်ကီ 0.7liter</p><p>ချောဆီပမာဏ 0.1liter</p><p>ဓားအရွယ်အစား 25.4-305-1.7mm</p><p>ပါကင်အရွယ်အစား(ရှပ်) 1500×10×110mm</p><p>အလေးချိန် 4.1kg</p><p>ပါကင်အရွယ်အစား(စက်) 380×350×450mm</p><p>အလေးချိန် 8.9kg</p>
HONDA Lawn Mower (တွန်းလှည်းမြက်ဖြတ်စက်)
<p>ရုန်းအားကောင်းကောင်းနဲ တွန်းလှည်းမြက်ဖြတ်စက်သည် ဥယျာဉ်၊ ခြံ၊ မြေ များတွင် ရှိသော မြက်ရိုင်းများကို လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။</p><p>ဈေးနှုန်းချိုချိုသာသာနဲ့ အရည်အသွေးစိတ်ချရတဲ့ မြတ်ဖြတ်စက်တစ်လုံးကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေခင်ဗျ.....။<br></p><p><br></p><p>အသေးစိတ်အချက်အလတ်များ</p><p>Model HONDA-GXV-160-7 (MANUAL)</p><p>Driving Mode Mamual</p><p>Engine4Stroke, air cooled</p><p>Fuel Gasoline</p><p>Engine Power 63cm,5.5 Hp</p><p>Max,Speed 4800 r/min</p><p>Blade Size 460mm (145x2)</p><div><br></div>
HONDA Lawn Mower (Auto မြက်ဖြတ်စက်)
<p>ရုန်းအားကောင်းကောင်းနဲ တွန်းလှည်းမြက်ဖြတ်စက်သည် ဥယျာဉ်၊ ခြံ၊ မြေ များတွင် ရှိသော မြက်ရိုင်းများကို လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။</p><p>ဈေးနှုန်းချိုချိုသာသာနဲ့ အရည်အသွေးစိတ်ချရတဲ့ မြတ်ဖြတ်စက်တစ်လုံးကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေခင်ဗျ.....။<br></p><p>အသေးစိတ်အချက်အလတ်များ<br></p><p>Model HONDA-GXV-160-7 (Auto-Drive)</p><p>Driving Mode Auto</p><p>Engine4Stroke, air cooled</p><p>Fuel Gasoline</p><p>Engine Power 63cm,5.5 Hp</p><p>Max,Speed 4800 r/min</p><p>Blade Size 460mm (145x2)</p>
4 - Stroke Knapsack Sprayer (ကျောပိုးဆေးဖျန်းစက်)
<p>ကျေးဇူးရှင်တောင်သူဦးကြီးများအဆင်ပြေစေရန်အတွက် ကျောပိုးဆေးဖျန်းစက်များကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ရောင်းချပေးနေပါသည်။&nbsp;</p><p>အသေးစိတ်အချက်အလတ်များ</p><p>Engine Model 139F New</p><p>Engine Type 1 Cylinder, 4-stroke</p><p>Engine Power 0.7kw/6500 rpm</p><p>Plunger dia; 18mm(Double Acting)</p><p>Max; Pressure 2.5.Mpa</p>
4 Stroke Sprayer (တွန်းလှည်းဆေးဖျန်းစက်)
<p>စိုက်ပျိုးရေးတောင်သူဦးများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်အတွင် ဆေးဖျန်းတဲ့အလုပ်ကို အချိန်တိုအတွင်းပြီမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ လက်တွန်းဆေးဖျန်းစက်နဲ့ဖိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။<br></p>
Mini Farming Tractor (ထွန်ကိုင်း)
<p>လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကျတဲ့ တောင်သူဦးကြီးများအကို ထွန်ကိုင်း လယ်ယာသုံး ပစ္စည်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။</p><p><br></p><p>မော်ဒယ် Golden Bow-NC Plus</p><p>အင်ဂျင်အား 15 HP (GT-155DI)</p><p>ရှေ့ဂီယာ 1-2-3</p><p>နောက်ဂီယာ 1</p><p>ထွန်ခြစ်အလျား 1490 MM (5ft)</p><p>ထယ်ဝိုင်းအချင်း 393 MM (1.3 ft)</p><p>စက်အရွယ်အစား 3050-1150-965 MM</p>
Brush Cutter RBC 411U (မြတ်ဖြတ်စက်)
<p>ရုန်းအားကောင်းကောင်းနဲ့</p><p>မြက်ရိုင်းရှင်းမလား❗️</p><p>တောတွေရှင်းမလား❗️</p><p>ဈေးနှုန်းချိုချိုသာသာနဲ့ အရည်အသွေးစိတ်ချရတဲ့ မြတ်ဖြတ်စက်တစ်လုံးကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေခင်ဗျ.....။</p><p>Brand : Max Pro&nbsp;</p><p>Model : RBC411U</p><p>Engine : 2-Stroke</p><p>
SHIFENG 34 သွားမြေမွစက်
ခေတ်သစ်လယ်ယာ ကုမ္ပဏီသည် ထွန်စက်နှင့်နောက်တွဲ များကို ရောင်းချ ဖြန့် ချီ လျက်ရှိပါသည်။မြန်မာပြည်တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တင်သွင်းဖြန့် ချိသောSHIFENG ထွန်စက်များဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းမြေမွစက်ကိုအသုံးပြုလိုပါက အလွယ်တကူကလပ်ကိုနင်းပြီး ဂီယာတံကိုအနောက်ဘက်သို့ ထိုးပေးပါကသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ဝယ်ယူ အသုံးပြု လိုပါက ခေတ်သစ်လယ်ယာ ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
Cp131 7HP-16HP Diesel Hand Walking Tractor ထွန်စက်
Diesel Walking Tractor: -- Diesel Engine Walking Tractor; Fuel Power Diesel Walking Tractor -- Diesel Walking Tractor 7HP-16HP -- Water Cooled Diesel Walking Tractor -- Single Cyliner Diesel Walking Tractor --4Stroke Diesel Walking Tractor -- Direct Injection Diesel Walking Tractor -- Kubota Type Diesel Walking Tractor -- Recoil Hand Start or Electric Key Start Diesel Walking Tractor -- 320KG Diesel Walking Tractor; 5.5-6L Diesel Walking Tractor -- Small Diesel Walking Tractor; Mini Diesel Walking Tractor -- Two Wheel Diesel Walking Tractor -- Walking Behind Diesel Walking Tractor -- Diesel Walking Tractor for Farming -- Diesel Walking Tractor for Agriculture -- Diesel Walking Tractor for Transportation -- Good Diesel Walking Tractor; Reliable Diesel Walking Tractor
Corn Harvester (ပြောင်းဖူးခြွေရိတ်စက်)
● Super performance, high efficiency. ● Full-featured, effort-saving. ● High performance ratio, good fuel economy. ● Easy operation, comfortable driving and ride. ● Usingarubber roller + cast-iron roller for the slot array corn husk remover providesagood corn husk removing effect and high efficiency. ● Equipped witharoller for aligning the 4-blade cutter andacombined-plate type stripper with high efficiency and reliability, resulting in less damage to corn stem. ● Exclusive grass discharge port with and discharging effect and high efficiency; Brand new grain recovery unit, providingaconvenient unloading and improving the operating speed.
HMD-S Post Hole Digger (မြေတွင်းတူးစက်)
- Perfect for those clean-ups after astorm, pruning or just processing general gardeningwastes - Creating mulch for garden plants and trees forconserving water - At the heart of the BX Chipper is an oversize heavyduty rotor and reversible chipping blades; - The self-feed hopper is designed to angle the brushagainst the rotor and blades, pulling the branches into the chipper; - Easily control where you want the chips with thedouble adjustable Exit Chute. The chute swivels 360 degrees and the top deflector adjusts thedistance.